Fri, Dec 14, 2018 | 22:48:16 NST
दुई हप्ताभित्र छपाई सकेर देशैभर पुस्तक बाड्ने जनक शिक्षाको तयारी
भक्तपुर, बैशाख १० - जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडले अबको दुई हप्ताभित्र सबै पुस्तक छपाई सकेर देशैभर वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रले बैशाखको पहिलो हप्ता भित्र देशभर कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तक पठाइसक्ने भने पनि रकम अभावको कारण देखाउँदै केही हप्ता अघि पुस्तक छपाइ रोकिएको थियो । धेरै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्न नसकिरहेको अवस्था केन्द्रले भने विभिन्न बहानामा पुस्तक छपाइमा ढिलाई गर्र्दै आएको छ ।
रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई रथारोहण गराईने
ललितपुर, बैशाख १० - पाटनको प्रसिद्ध रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्राको लागि तयारी तीव्र रुपमा भैरहेको छ । आइतवार रथमा मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति राखिने छ । टंगलको मच्छिन्द्रबहालमा रहेको मूर्तिलाई बेलुकी रथमा राखिने रथ निर्माणमा संलग्न दिलकुमार बाराहीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार रथमा सुनको झ्यालढोका र काठ राख्ने काम पनि आजै हुन्छ । ललितपुरको पूल्चोक दमकल नजिकै रथ बनाउने काम भैरहेको छ ।
तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्न साहित्यकारको आग्रह
तनहुँ बैशाख ९ – साहित्यकर्मीले तोकिएकै समयमा संविधान निर्माण गर्न नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । नववर्ष २०६९ का अवसरमा गण्डकी वाङ्मय प्रतिष्ठान तनहुँले शनिवार दमौलीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा जिल्लाका ६० जना साहित्यकारले रचना मार्फत यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
आगलागीले घर जल्यो
संखुवासभा, बैशाख ९ – संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीमा शनिवार दिउँसो आगलागी हुँदा दुईवटा घर जलेको छ । खाँदबारीको नयाँवस्ती टोलमा रहेको पदमबहादुर तामाङको अगेनावाट सल्किएको आगोले उनको पुरै घर जलेर ध्वस्त भएको हो । आगोपछि ग्याँस सिलिण्डर पड्किएर छिमेकी भुपालबहादुर महतोको घर पनि जलेको छ ।
दाङ, बैशाख ९ – दाङ्गको रेडियो सरयु गंगाका सम्पादक गणेश आचार्यलाई तरुण दलका जिल्ला अध्यक्ष टीका घर्तीले ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन् । गत बुधबार राति दाङको दमारमा ट्रक लुटपाटमा संलग्न भएका नेविसंघ र तरुण दलका कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको समाचार प्रसारण गरेको विषयमा घर्तीले धम्की दिएको आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
खानेपानी नपाएपछि गाउँले विस्थापित
सल्यान वैशाख ९ –सल्यानको पश्चिमी घांजरी पीपल गाविसको तीनवटा वडामा पानीको हाहाकार भएको छ । वडा नबर ४, ५ र ७ मा पानी पाउन छाडेपछि स्थानीय वासिन्दा बसाई सर्न थालेका छन् । एक महिनायता १० वटा घर विस्थापित भइसकेको स्थानीयले बताएका छन् ।
पत्रकारको मर्यादा अनुगमन गर्न समिति
ललितपुर, बैशाख ९ – नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुरले पत्रकारहरुलाई ब्यवसायिक मर्यादामा ल्याउन अनुगमन उप समिति गठन गरेको छ । महासंघको शनिवार बसेको कार्यसमिति बैठकले शाखाका उपाध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
पैसा खुवाएर लाइसेन्स बनाउन खोज्ने ९४ जना पक्राउ
गोबिन्द शर्मा/उज्यालो । नेपालगञ्ज, बैशाख ९ - नेपालगञ्ज नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र बनाइरहेको अवस्थामा तीनजना दलालसहित ९४ जना नेपालगन्जबाट पक्राउ परेका छन् । नेपालगन्जको बसपार्करोडमा रहेको क्यापिटल होटलबाट ५९ र जलजला होटलबाट ३५ जना पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरिक्षक उदय तामाङ्गले जानकारी दिनुभयो ।
आगलागीबाट डेढ लाखको क्षती
दाङ, बैशाख ९ - दाङको तुल्सीपुर नगरपालिका १० सिरखोलाका जहरसिंह टमाटाको घरमा शुक्रवार राती आगलागी भएको छ । आगलागीवाट झण्डै डेढ लाख रुपैयाँ वरावरको क्षती भएको पीडितले बताएका छन । आगलागीवाट घरमा रहेको अन्नपात, लत्ताकपडा सवै जलेर नष्ट भएको छ ।
लमजुङ, बैशाख ९ - लमजुङको भोटेओडार सिउँडीबारमा प्रहरीले लागुऔषध सहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले चेकजाँच गर्ने क्रममा लागुऔषध सहित वेसीशहर गाविस ९ का शुभाष अधिकारी र शिव खातीलाई पक्रेको हो ।
४ जना पत्रकारमाथि आक्रमण
कपिलवस्तु, बैशाख ९ - कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा शुक्रवार राति चारजना संचारकर्मीमाथि आक्रमण भएको छ । रेडियो समान्तामा कार्यरत कृष्ण गैरे, प्रदीप चौधरी, कृष्ण आचार्य र अर्जुन गुरुङ्लाई नचिनेका मान्छेको समूहले कुटपीट गरेको हो । राती नौ बजे होटलबाट खाना खाएर रेडियो जाँदै गर्दा चन्द्रौटा चोकमा पाँच जनाको समूहले आक्रमण गरेको संचारकर्मीहरुले बताएका छन ।
काठमाडौं, बैशाख ९ - मातातीर्थ औंसी अर्थात आमाको मुख हेर्ने दिन । आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर गरी आशिर्वाद लिएर शनिवार मातातीर्थ औंसी मनाइँदैछ । बिहानै उठी नुहाएर आफ्नी आमालाई राम्रा राम्रा लुगा र मीठामीठा–तागतिला खानेकुरा खान दिई आशीर्वाद थाप्ने चलन छ । आमा नभएकाहरू भने आमाको नाममा श्राद्ध गर्दै आमाको सम्झना गर्छन् ।
ट्रक दुर्घटनामा २ को मृत्यु
हेटौंडा, बैशाख ९ - मकवानपुरको मनहरीमा शुक्रवार राती भएको ट्रक दुर्घटनामा २ जनाको ज्यान गएको छ । हेटौंडाबाट नारायणघाटका लाग छुटेको ना २ ख ५४८३ नम्बरको ट्रक मनहरीमा सडकमै पल्टिँदा चितवन पिप्ले ६ घर भएका चालक २८ वर्षिय बिक्रम राई र सहचालक २३ वर्षिय शुकबहादुर राईको ज्यान गएको हो ।
बलात्कारको आरोपमा माओवादीका स्थानीय नेता पक्राउ
धादिङ, बैशाख ८ - धादिङ जिल्लाको मैदी गाविस वडा नम्बर ४ की १५ बर्षिया एक वालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले एकिकृत नेकपा माओवादी मैदी गाउं कमिटीका सेक्रेटरी लालवहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ । गत बैशाख २ गते शनिवार घरमा सुतिरहेकी बालिकालाई घरवाट वोलाएर घर भन्दा केहि पर लगि बलत्कार गरेको आरोप कार्की माथि लागेको छ ।
१६ जना कर्मचारी छड्केमा
बुटवल, बैशाख ८ - राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले शुक्रवार रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका र नापी कार्यालयमा छड्के जांच तथा अनुगमन गर्दा दुबै कार्यालयबाट १६ जना कर्मचारी विना सुचना अनुपस्थित रहेको फेला पारिएको छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा विहान १० बजेर १८ मिनेट जाँदा गरिएको हाजिरी छड्केमा १ जना इन्जिनियर, १ शाखा अधिकृत र १ जना सव इन्जिनियर सहित १३ जना कर्मचारी अनुपस्थित रहेको पाइएको थियो ।
कसले राख्या होला यति धेरै गोली ?
कैलाली, बैशाख ८ - कैलालीको सुगरखालको भालुमारे खोलाको ओढारमा सशस्त्र प्रहरीले ठूलो परिमाणमा गोली फेला पारे पछि यी गोली कसले र किन राखेको होला भन्ने खोजी सुरु भएको छ । सुगरखाल गाउँ विकास समिति वडा नं. ९ भालुमारे खोलामा सशस्त्र प्रहरी बल उग्रतारा गण टिकापुर मातहत रहेको डुडेझाँरी बेस क्याम्पले आधुनिक हतियारमा प्रयोग हुने गोलीहरु विहीवार राती बरामद गरेको थियो ।
बसको ठक्करबाट १ को मृत्यु
मकवानपुर, बैशाख ८ - मकवानपुरमा भएका छुट्टा छुट्टै दुर्घटनामा एक जनाको ज्यान गएको छ भने पाँच जना घाइते भएका छन् । हेटौडाबाट राईगाउँका लागि छुटेको ना ४ ख ६४८३ नंम्बरको बसले फापरबारी १ पाँचपाण्डवमा ठक्कर दिंदा सिन्धुली पीपलमाडी गाबिस ३ बस्ने ३६ बर्षिय धनबहादुर भुलुनको ज्यान गएको हो ।
रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ
भोजपुर, बैशाख ८ - विभिन्न संघसंस्था खोलेर लाखौं रुपैंया ठग्दै हिंडेका संखुवासभा ८ जोगीडाँडाका २५ वर्षिय युवक रामचन्द्र भण्डारीलाई भोजपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । क्यादुरी अफ एग्रिकल्चर मेट्रअल सेन्टर, भोजपुरको नाममा संस्था खडा गरी एसएलसी दिएर बसेकालाई रोजगारी दिने भन्दै ९६ हजार रुपैयाँका दरले धरौटी राख्नुपर्ने भनेर ठगी गर्नै लाग्दा प्रहरीले भण्डारीलाई पक्रेको हो ।
लोकतन्त्र दिवसमा सार्वजनिक छुट्टी
काठमाडौं, बैशाख ८ - सरकारले लोकतन्त्र दिवसको दिन सार्वजनिक विदा दिने भएको छ । गृहमन्त्रालयले शुक्रवार विज्ञप्ती निकालेर बैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवसका दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिएको हो । बार्षिक पात्रो र क्यालेन्डरमा वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवसका दिन विदा उल्लेख गरिएको छैन ।
युवा युवतीको प्रेम १४ महिना मात्रै
काठमाडौं, बैशाख ८ - किशोर किशोरीले कति समय प्रेममा बिताउँदा होलान ? के यस्तो प्रेम विवाहमा परिणत होला त ? प्रेम मनोरञ्जनका लागि अथवा जीवनयापनका लागि ? यी यस्ता प्रश्न १० देखि २४ उमेर समूहका किशोर–किशोरी तथा युवाका अभिभावकले कुराकानीका विषयवस्तु बनाउने गर्दछन् तर सही उत्तर पाइरहेका थिएनन् पनि । ती उमेर समूहले गर्ने प्रेम केवल १४ महिनामै अन्त्य हुने गरेको र प्रेम मनोरञ्जनका लागि पनि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा शुक्रवार सार्वजनिक किशोर किशोरी तथा युवा सर्वे...
सुरक्षाकर्मीको बढुवा सम्बन्धी ऐन स्वेच्छचारी : राज्य व्यवस्था समिति
काठमाडौं, बैशाख ८ - संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सरुवा, बढुवा सम्वन्धी ऐन नियममा भएका प्रावधान हचुवा र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तीको भएको ठहर गरेको छ । समितिले सरुवा, बढुवा र पदस्थापना गर्दा सरकारले चलखेल गर्न सक्ने प्रकृतिका भएकाले ६ महिना भित्र ऐन नियम परिमार्जन गर्न वा नयाँ तर्जुमा गर्न सरकार र गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बादी बालबालिका पढ्नबाट बञ्चित
राजेन्द्र कार्की/उज्यालो । जाजरकोट, बैशाख ८ - देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहेका बेला जाजरकोट खगेनकोट १ का ११ बर्षिय बलबहादुर बादी खोलामा माछा मार्न ब्यस्त छन् । उनी विद्यालय नै नगएका भने होइनन्, ३ बर्षअघि नजिकैको विद्यालयमा भर्ना भएका बलबहादुर विद्यालयमा टिक्न सकेनन्, दिनहु कक्षा छाड्दै जादा अन्त्यमा उनले पढाइ समेत छाड्न पुगे । ८ बर्षिया सपना बादी गत बर्ष १ कक्षामा भर्ना भइन् तर विद्यालय नै गइनन् ।
रिसाल दम्पत्तिद्वारा हुम्लाका विद्यालयलाई कम्यूटर वितरण
रमेश ऐडी/उज्यालो । हुम्ला वैशाख ८ – वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालका दम्पत्तिले हुम्लाका ७ वटा सरकारी विद्यालयलाई १२ वटा कम्प्युटर सहयोग गरेका छन् । विकट जिल्ला हुम्लाका सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कप्युटर चिनाउन व्यक्तिगत खर्चबाट सहयोग गरेको शुक्रवार हुम्लामा आयोजित कम्प्युटर हस्तान्तरण कार्यक्रममा रिसालले बताउनुभयो ।
फोटो सहितको नामावलीले मतदाता घटे
केशव अधिकारी/उज्यालो । धादिङ, बैशाख ८ – फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन शुरु भएपछि धादिङ जिल्लामा मतदाताको संख्या घटेको छ । फोटो सहितको मतदाता नामावाली संकलन गर्दा दोहोरो नाम काय नरहने भएपछि मतदाता संख्या घटेको हो ।
कर्णेलले मान्छे कुटेको विषयमा सेनाले छानवीन गर्ने
काठमाडौ, बैशाख ८ – बाँकेको नेपाली सेनाका कर्णेल राजु नेपालीले स्थानीय बासिन्दालाई कुटपीट गरेको घटना बाहिर आएपछि सेनाले त्यसको छानबीनका लागि कोर्ट अफ ईन्क्वायरी बोर्ड गठन गरेको छ ।
विद्युत चोरी गर्ने २४ जना पक्राउ
चितवन, बैशाख ८ –विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले विद्युत चोरी गर्ने पश्चिम चितवनका २४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्राधिकरणका कर्मचारी र प्रहरीको टोलीले उनीहरुलाई शुक्रवार बिहान पक्राउ गरेको विद्युत प्राधिकरण भरतपुरका प्रवक्ता सुरेश पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।
यार्सागुम्बा टिप्ने लेकमा प्रहरी गस्ती
आश गुरुङ/उज्यालो । लमजुङ, बैशाख ८ – यार्सागुम्बा टिप्ने समयमा हिमालपारीको जिल्ला मनाङका उत्तरी लेकमा प्रहरीले गस्ती गर्ने भएको छ । यार्सागुम्बा टिप्ने क्रममा हुन सक्ने झगडा र असुरक्षालाई ख्याल गर्दै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र विकास समिति र जिल्ला सुरक्षा समितिले प्रहरी प्रहरी खटाउने निर्णय गरेको हो । सुरक्षाकै कारण यसवर्ष पनि बाहिरी जिल्लाकालाई मनाङमा यार्सागुम्बा टिप्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । मनाङका १३ वटै गाविसमा गठन भएको संरक्षण क्षेत्र ब्यवस्थापन समितिले बाहिरी जिल्लाका मानिसहरु यार्सागु...
भक्तपुरमा पुस्तक पसलमा छापा
रमेश गिरी/उज्यालो । भक्तपुर, बैशाख ८– भक्तपुरमा शुक्रवारदेखि पुस्तक पसलहरुमा छापा मारिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, प्याब्सन, एनप्याब्सन, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, अभिभावक संघ, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधि, प्रहरी र पत्रकारको टोलीले भक्तपुर र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका पुस्तक पसलमा छापा मारेको हो ।
एक वर्षदेखि वेपत्ताको कंकाल भेटियो
राजेन्द्र कार्की/उज्यालो । जाजरकोट, बैशाख ८ – एक वर्षदेखि बेपत्ता जाजरकोट गर्खाकोटका २२ वर्षिय दीपक रावतको हत्या भएको पुष्टि भएको छ । गएको वर्ष जेठको १२ मा हराएका रावतको हत्या गरी गाउँकै जंगलको एक ओडारमा फालिएको अवस्थामा दुई हप्ताअघि उहाँको कंकाल भेटिएपछि हत्या भएको पुष्टि भएको हो ।
लोकतन्त्र दिवश कसरी मनाउने ?
काठमाडौ, बैशाख ८ – लोकतन्त्र दिवसबारे सरकारले दलहरुसित छलफल गर्ने भएको छ । वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस भएपनि सरकारले यसवर्ष कुनै निर्णय नगरेकाले पात्रो र क्यालेन्डरमा विदा उल्लेख गरिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले नै लोकतन्त्र दिवसबारे चासो नदिएको भनाई सार्वजनिक भैरहँदा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले भने दिवसको बारेमा दलहरुसित छलफल गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।
पाण्डेलाई नेपाल नफर्काउन माग
सन्तोष न्यौपाने/उज्यालो । बेल्जियम, बैशाख ७ - शरणार्थीका रुपमा बेल्जियममा बस्दै आएका पुस्ता पाण्डेलाई नेपाल नफर्काउन अनुरोध गर्दै लुवेनमा आज स्थानीय बेल्जिक सहित नेपलीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन । उनीहरुले बेल्जियमको लुवेन शहरमा रहेको अदालत अगाडि पाण्डेलाई नेपाल पठाउन सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन ।
महन्त नियुक्तीमा १० लाख रुपैयाँ घुस
काठमाडौं, बैशाख ७ - काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ मन्दिरमा १० लाख रुपैयाँ घुस लिई महन्त नियुक्त गरिएको आरोप पूर्व पूजारीले लगाएका छन् । गुठी संस्थानका प्रशासक बलिराम साह तेलीले अनुभवै नभएका निगमानन्द गिरीलाई १० लाख रुपैयाँ घुस लिएर महन्त बनाएको आरोप पूर्व मुख्य पुजारी परमात्मा नेपालले आरोप लगाउनुभएको छ । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्व पूजारी नेपालले आफूलाई नियुक्त गर्नका लागि १० लाख रुपैयाँ मागेको र आफूले अस्वीकार गरेको बताउनुभयो । पैसा दिन अस्वीकार गरेपछि बलिराम र सनातन धर्म समाजका अध्यक्ष धि...
पत्रकार पौडेलको हत्याको आरोप लागेका राई पक्राउ
झापा, बैशाख ७ - पत्रकार यादव पौडेल हत्याकाण्डका अभियुक्त मदन राईलाई प्रहरीले पक्रेको छ । राईलाई प्रहरीले झापाको काँकडभिट्टाबाट पक्रेको हो । चैत २१ गते राति पत्रकार पौडेलको हत्या भएपछि राई फरार थिए । अभियुक्त युवराज गिरी, सोमनाथ ढकाल र मञ्जु भनिने फूलमाया कार्की भने थुनामा छन् ।
पशुपति क्याम्पसमा गोली चल्दा १२ जना घाइते
काठमाडौं, बैशाख ७ - काठमाडौंको पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा नेविसंघ र अनेरास्ववियुबीच भएको झडपमा गोली चलेको छ । झडपमा १२ जना विद्यार्थी घाइते भएका छन् । घाइते मध्ये ६ जनाको अवस्था गम्भीर छ । घाइतेलाई उपचारका लागि ओम अस्पताल लगिएको छ ।
प्रहरी जवान होटलमै मृत भेटिए
नेपालगन्ज, बैशाख ७ - जाजरकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत एकजना प्रहरी जवान आज नेपालगन्ज स्थित एक होटलको कोठामा मृत भेटिएका छन् । नेपालगन्ज स्थित मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्रमा संचालित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाजरकोटवाट नेपालगन्ज आएका प्रहरी जवान दयाराम पौडेल विहिबार विहान मृत भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।
भावुक योगी/उज्यालो । बर्दिया, बैशाख ७ - बर्दियाको बबई नदीमा निमार्णाधीन सिंचाई नहरमा काम गर्दा करेन्ट लागेर वुधवार राती एक जनाको ज्यान गएको छ । बबई सिंचाई आयोजना अन्र्तगत बबई नदिको पश्चिम तर्फ कुमार निर्माण सेवाले निमार्ण गरिरहेको सिँचाई नहरमा करेन्ट प्रवाह गर्नेक्रममा बाँके नौबस्ता ७ बनियाभारका ४५ वर्षिय धर्म तिमिल्सेनाको ज्यान गएको हो ।
पढ्ने होइन त ब्रिजकोर्ष ?
चाहना लामिछाने/उज्यालो । काठमाडौ, बैशाख ७ – एसएलसी परीक्षा सकिने बित्तिकै शहरबजारमा ब्रिजकोर्षको चहलपहल शुरु भएको छ । एसएलसीको नतिजा नआएसम्म फुर्सदमा हुने विद्यार्थीका लागि बिभिन्न इन्ष्टिच्युटहरुले ब्रिजकोर्ष पढाइरहेका छन् । के हो त ब्रिजकोर्स ?
निजामति कर्मचारी संगठनको स्थापना दिवश
काठमाडौ, बैशाख ७ – नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले बिहीबार आफ्नो स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईरहेको छ । निजामती कर्मचारीको हक हित संरक्षणका लागि २०४७ साल बैशाख ७ गते संगठनको स्थापना भएको थियो ।
चरेस बनाउने पाउडर बरामद
पर्सा, बैशाख ७ – पर्साको सोनबर्षाबाट प्रहरीले गएराती हतियार सहित लागु औषध बरामद गरेको छ । प्रहरीले १ सय ३५ किलो चरेस बनाउने पाउडर, १२ बोरको एक थान बन्दुक, एउटा पेस्तोल र ना १२ प ५९२७ नम्बरको मोटरसाईक बरामद गरेको हो । चरेस बनाउने पाउडर बोकेका भरीया र प्रहरीबीच दोहोरो फायरींग समेत भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
हलियाको नाममा गैरहलियाले पाए परिचयपत्र
निमेन्द्र शाही/उज्यालो । बाजुरा, बैशाख ६ – जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वितरण थालेको हलिया परिचयपत्र वास्तविक हलियाहरुले पाउन सकेका छैनन् । कार्यालयले संकलन गरेको तथ्याङ्कमा वास्तविक हलियाहरु छुटेकाले परिचयपत्र पनि नपाएका हुन् । बरु हलियाको नाममा गैर हलियाहरुले परिचयपत्र लिएको हलियाहरुले आरोप लगाएका छन् ।